ဆီလီကွန်သိမှုဆိုင်ရာသင်ယူမှုလုပ်ကွက်များကို - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်းကင်း ၀ ယ်ယူပါ WoopShop®
silicone သိမှုသင်ယူ Blocks
$14.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $18.99
ဆီလီကွန်သိမြင်မှုသင်ယူခြင်းလုပ်ကွက်များ - backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
သက်ဆိုင်အသက်: 0-4 နှစ်အရွယ်အတွက်သင့်တော်သည်။
အရေအတွက်: 6pcs, 12pcs
တောက်ပသောအရောင်များ၊ ကလေးငယ်၏လက်နှင့် ဦး နှောက်ကိုသုံးနိုင်စွမ်းကိုမွေးမြူခြင်း၊ အစောပိုင်းကလေးဘဝပညာရေးနှင့်အတူလိုက်ပါရန်အတွက်ကောင်းသောလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။
ဘက်ပေါင်းစုံသုံးဖက်မြင် 3D ကယ်ဆယ်ရေးသည်ကလေး၏သိမှုစွမ်းရည်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသိကျွမ်းခြင်း၊ ပုံသဏ္learningာန်သင်ယူခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊
ကလေး၏ဆုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ပါ၊ အသံကိုညင်သာစွာဆွဲထုတ်ပါ။ ကြီးမားသောအတုံးအမှုန်များ၊ အဆင်ပြေသောဆုပ်ကိုင်မှု၊ ကလေး၏ဖမ်းဆီးနိုင်စွမ်းနှင့်ကြားနာခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါ။
Splicing အသိအမှတ်ပြုမှုစွမ်းရည်, အပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာခွက်နှင့်ခုံးဒီဇိုင်း, ကလေး၏ညှိနှိုင်းနိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်, ကလေး၏အသိအမှတ်ပြုမှုစွမ်းရည်ကိုခိုင်ခံ့စေနိုင်သည်။
ရေပေါ်ရေချိုးသည့်အရုပ်များကဲ့သို့နှစ်ဆဖြစ်သည့်ဤ silicone လုပ်ကွက်များသည် jig-saw ပဟေlikeိများနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုလိုက်ဖက်သည်။ ၎င်းတို့ကိုအတူတကွ စုစည်း၍ ခွဲထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ကလေးငယ်သည်၎င်း၏မော်တာစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေပြီးအစောပိုင်းသိမှုစွမ်းရည်တိုးတက်စေသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ အရောင်များနှင့်ပုံသဏ္refာန်များသည်သူတို့၏တုန့်ပြန်မှုများ၊
3D ဖောင်းကြွအဆင့်မြင့် silicone လုပ်ကွက်များသည်တစ်ဖက်စီသည်ထူးခြားသည်။
12 /6ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များဖြင့်တစ်ခုချင်းစီတွင်တိကျသောတိရစ္ဆာန်များ။
"Geometry Splicing" ဒီဇိုင်းသည်အမျိုးမျိုးသော geometric cutouts နှင့်выступများနှင့်အတူ။
သွားနှင့်ကိုက် - | သွားများကိုအပျော့စား၊ အကိုက်ခံရရန်မပျော့။
အခမဲ့: Formaldehyde, BPA, & PVC ။ အဆိပ်မဟုတ်ပါ။
12 သို့မဟုတ်6လုပ်ကွက်အားလုံးသည်ရေတွင်မျောပါသွားသည်
ငါ့ကိုတစ် ဦး encarlan y volveré။ Los colores သား muy bonitos y က suaves ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလာစေတယ်။ y က caja venía con un roto ။
отличныекубики! правда, продавецуказалнетотномеротслеживания။
အရမ်းကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့နံပါတ် ၄ မှာနံပါတ်လေးရှိတယ်။
9 dagen binnen ၌! ဟယ် mooie blokjes ။
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ !! ပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစား